Antohomadinika : Vao nivoaka ny fonja dia efa tratra nanendaka indray – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → août → 23 → Antohomadinika : Vao nivoaka ny fonja dia efa tratra nanendaka indray
Antohomadinika : Vao nivoaka ny fonja dia efa tratra nanendaka indray
Anisan’ny faritra mena amin’ny fanendahana sy ny fanafihana raha iny faritra Antohamadinika sy ny manodidina iny, indrindra moa fa raha mbola maizimaizina iny. Soa ihany anefa, fa manao fisafoana andro aman’alina ireo mpitandro filaminana eny an-toerana.
Tamin’izany indrindra mantsy no nahasamborana tovolahy iray, ny alarobia alina lasa teo. Tokony ho tamin’ny sivy ora sy sasany alina tany ho any no nahatsikaritra lehilahy hafahafa fihetsika ireo pôlisin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahefatra. Teo am-panarahana olona hafa teo alohany mantsy ity lehilahy ity; izay heverina fa nokasainy hendahina teny an-toerana. Nanatona avy hatrany ireo mpitandro filaminana ka vaky nandositra ity farany. Nifanenjehana ary voasambotra. Rehefa nosavaina dia tsy nahitana kara-panondro tany aminy ary rehefa nofotorana lalina dia fantatra fa efa nifonja ny lehilahy noho ny harom-paosy. Tamin’io fotoana io, dia niaiky ranamana fa saika hanendaka an’ilay olona narahany. Tsy vitan’izay , fa dia fantatra ihany koa fa mpifoka rongony ikoizana ingahirainy. Taorian’ny fakàna am-bavany azy, dia natolotra ny Fampanoavana omaly ary naverina nadoboka am-ponja. Amin’izao tokoa dia tsy vitsy ireo mpanendaka sy tontakely no miverina manao ny asa ratsiny indray aorian’ny fivoahany ny fonja. Ny tena loza, raha mpangaraom-paosy fotsiny izy teo aloha dia lasa mivadika ho mpandeka miaraka amin’ny fitaovam-piadiana izy aty aoriana. Ary miafara hatramin’ny fidirana amin’ny tambajotran-jiolahy mahery vaika. Tsy toeram-panarenana intsony ny fonja amin’ireny karazan’olona ireny, fa lasa karazana toerana fanazaran-tena sy fampitomboana fahaizana amin’ny ratsy.
Avery Liliane 24 août 2019 at 2 h 02 min · Edit
Firenena faran’ny mahantra indrindra eto ambon’ny tany i Madagascar .Renivohitra laharana voalohany amin’ny fahalotoana Antananarivo . Madagascar Firenena classer zone noir amin’ny tsy fandriampahalemana. Noana sy mahantra tanteraka ny ankamaron tsika Malagasy. Azo ovana daholo ireo rehetra ireo Amin’ny alalan’ny famoronana asa , lalàna miaro ny mpiasa sy ny mpampiasa , assurance ho an’ny accident de travail . Rehefa miasa ny Ray
amandreny manana fahafahana handefa ny akizy hianatra . obligations mandeha mianatra mandrampahafeno 16 taona . Rehefa miasa manana fahafahana mihinankanina rehefa noana .fahafahana mitsabo tena rehefa marary . Tokony ho jerevan’ny fanjakana manonkana ny olona tena sahira . Fitsaboana maimaimpona , fianarana tsy andoavambola ho azy ireo . Fananganana traikefa izay azo atao tsara , cotisation handraisana retraite rehefa ratrizay misotro ronono . Fiarovana sy fanomezana lanjany ho asa rehetra ohatra ny mpanasa lamba , ny mpanamboatra kiraro , ny mpanao sy mpitaom briky , ny mpitarika sy ny mpanosika posy , ny mpivarotra mofo gasy , ny mpivarotra anana ,…sy ny asa marobe tsy voatanisa . Antony iray lehibe hiadina amin’ny fahantrana izay miteraka tsy fandriampahalemana . A condition ny rehetra Samy hanana fandavantena hanaja lalàna .ny fanjakana mba hijery antsika akaiky Hamorona asa .hanamora sy hanampy ahazoana trano hipetrahana amin’ny bonne condition. Hanangana dispensaire ahafahana mitsabo tena rehefa marary . Angatahina ny gouvernement Malagasy mba hijery akaiky fa mijaly ny vahoaka . Ny kely mba hanana ahitan doza rehefa tsy matinin’ny mpagalatra dia mahafaty mpagalatra. Za Mino fa misy dia misy ny vahaolana …azo tanterahina tsara. Misaotra tompoko .
Rodrick 23 août 2019 at 13 h 11 min · Edit
Inona no tokony hataon’ireo izay atao hoe « tompon’andraikitra (olontsotra manankatao na manampahefàna na mpanao pôlitika) » manoloana an’izany ? Ny kibo tsy maintsy asiana sakafo, ny saina mety efa tsy mahataka-davitra intsony na ketrika mahomby,sns…ny eto amintsika ve no tsy ampy harena intsony (toa tsy marina anefa) sa ny fanabeazana mihitsy no potika, inona no namotika azy ?….Mampalahelo, izay sisa no azo ambara satria miraviravy tànana ny maro amin’izao fotoana izao, nefa ny zava-doza mananika ny firenena mandady miakatra moramora.Inona no hataontsika raha sanatria 50% isanjaton’ny tanora no lasa tsy mahafantatra intsony ny atao hoe « soatoavina », tsy mahalala afatsy izay hahavoky ny kibony na @fomba tsara na ratsy aza.Efa mivadika biby anie izany e ! Dia sanatria ve lasa biby ny taranaka malagasy ?